Welcome to Aayaha Nolosha » MID KA MID AH MAGAALOOYINKA SOOMAALIYEED OO AY QURUXDEEDU DAYACAN TAHAY.
MID KA MID AH MAGAALOOYINKA SOOMAALIYEED OO AY QURUXDEEDU DAYACAN TAHAY.
January 28, 2019 - Waxaa Qorey : Bile Mohamed -
Deegaanka Ceel Sheekh wuxuu ku yaalla dhul buuraley ah oo weliba leh xeebo ku habboon dalxiiska, waa dhul aad u qurxoon, wuxuu u dhexeeyaa degmada Lug-hayo oo dhinaca galbeedka ka xiga iyo degmada Bul Xaar oo dhinac bari ka xiga, magaalada Hargeysa wuxuu u jiraa 105 Kiiloomiitar dhinaca waqooyi ee Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Somaliland.
Wariyaha BBC, Cabdullaahi Jaamac oo dhawaan booqasho ku tegay deegaanka Ceel Sheekh ayaa waxaa uu la kulmay qaar kamid ah dadka deegaanka oo la daala dhacaya dhibaatada ka jirta halkaasi.
Maamulaha dugsiga Ceel Sheekh, Axmed Cabdullaahi Aadan ayaa sheegay in labo macalin oo kaliya ah ay Iskuulka ku dhigaan isla markaasna aysan helin wax mushaar ah oo ay si tabbarucaad ah cilmigooda ugu deeqaan ardeyda.,
Axmed ayaa intaas ku daray in marsii horreysay dowladda ay ballan qaaday in macalimiinta sida tabarucaadka ah ku shaqeyn jiray la siin doono mushaaraad balse aysan taasi dhicin.
Deegaanka oo ay cimiladiisu kulushahay, haweenka ku nool Ceel Sheekh ayaa ka cabanayaa in aysan helin adeegyada caafimaadka, arrintaasi oo ay dhibaato kala kulmaan gaar ahaan haweenka oo aanan heysanin goobo caafimaad ay ku umulaan.
“Ma lihin goob caafimaad oo ay dumarku ku umulaan .. mana heysanno Ambulance oo aan dumarka kula cararno, awooddayadu aad ayay u hooseysaa, waxaan jeclaan laheyn in wax naloo qabto caafimaadka” ayay tiri Muno Maxamed Cabdi oo ah umuliso dhaqameed ku sugan Ceel Sheekh.
Waxay intaasi ku dartay in kaalinteeda ay ka qaadato caawinta haweenka umulayo balse wixii awoddooda ka baxsan ay faraha ka qaadaan.
Guddoomiyaha Ceel Sheekh,Maxamad Jaamac Xirsi Nageeye ayaa jeediyay codsi ah in laga caawiyo dhisitaanka xarumaha ay ku umulaan haweenka sii loo badbaadiyo nolosha hooyooyinka.
Ceel Sheekh waxaa sannadkii lasoo dhaafay ku dhufatay duufaantii loogu magac daray ‘Sagal’oo saameyn ku yeelatay deegaanka balse waxay u muuqata inuu kasoo kabtay khasaarihii kasoo gaaray duufaanta.
Inkasta oo deegaanku oo horumar gaaray sida helidda korontada iyo biyaha, haddana dhinaca kale waxaa heysata dhibaato dhanka helidda nolosha aasaasiga sida adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada.